IBoston Dynamics iyasimangaza ngemascot yayo entsha yamarobhothi | Izindaba zamagajethi
IBoston Dynamics iyasimangaza ngemascot yayo entsha yamarobhothi
Okwamanje uzokwazi, ikakhulukazi uma ungumthandi womhlaba wamarobhothi futhi uthanda ukugcina usesikhathini nazo zonke izindaba ezinhle ezivela cishe masonto onke ezihlobene nale nkambu, ukuthi hlobo luni lwenkampani. Boston Dynamics, eyatholakala ngaleso sikhathi, ngenxa yobuchwepheshe nentuthuko eyayitholwa emhlabeni we-robotics, hhayi ngaphansi kwe-Google, okwathi, lapho kufika isikhathi nangemva kokuqinisekisa ukuthi kwakungeyona yonke into ezuzisayo ngokwezomnotho lokho babelindele, okungenani yilokho okwaphawulwa ngaleso sikhathi, wanquma ukuyithengisa. Ngale ndlela ngeshwa, noma okungenani kwabonakala kimi ngaleso sikhathi, kufana IBoston Dynamics idlulela kuSoftBank.
Lokhu kungenxa yokuthi ngakolunye uhlangothi, iBoston Dynamics ithola izimali ezidingekayo ukuze iqhubeke nocwaningo nentuthuko yayo, okuyinto okungangabazeki ukuthi sonke kufanele siyibonge ngoba amaphrojekthi ayo ajwayele phambili kakhulu, ngokwezobuchwepheshe , kusuka komunye umncintiswano. Uma usesha ngokushesha i-Boston Dynamics kuwebhu, impela, ngaphandle kokuthi igama layo lingahle lingazwakali njengento kuwe, amarobhothi alo enza, ikakhulukazi uhlobo lwayo izilwane ezine ezinemilenze selokhu ikhono lakhe elikhulu nokulinganisela kuhambe zonke izinhlobo zamakhasi ezobuchwepheshe ngisho nokuxhumana nabantu. Kulesi senzakalo nangemva kwezinyanga ezimbalwa ebesingakazi lutho ngazo, babuyela enkampanini ukuyokwethula iphrojekthi yabo yakamuva emphakathini, esibhabhadiswe njenge I-SpotMini.
1 IBoston Dynamics, ngemuva kwezinyanga inganikezanga zindaba eyodwa, isitshela ngeSpotMini, uhlobo lwenja yamarobhothi amakhono ayo azokumangaza nakanjani
2 Ukuze sazi zonke izifiso zeprojekthi efana naleyo enikeza impilo ku-SpotMini kuzofanele silinde ukwethulwa kwayo okusemthethweni
IBoston Dynamics, ngemuva kwezinyanga inganikezanga zindaba eyodwa, isitshela ngeSpotMini, uhlobo lwenja yamarobhothi amakhono ayo azokumangaza nakanjani
Njengoba iBoston Dynamics ichaza le phrojekthi, sizobe sibhekene nohlobo lwenja eyi-robot engeyona enye into ngaphandle kwe- isilwane semodeli yaso enkulu kunazo zonke, bona ngokwabo abayibiza ngokuthi yiBigDog. Iqiniso ngukuthi ayikho irobhothi elilodwa elingaba yisilwane sakwelinye, yize lisebenza kahle ukukhombisa ukuthi, okwamanje, banobuchwepheshe obudingekayo abanabo bokuqala ukukhiqiza amarobhothi osayizi omncane kakhulu, yize amakhono afanayo nangaphezulu.
Enye yezingxenye ezithakazelisa kakhulu zesizukulwane esisha seSpotMini, khumbula ukuthi ezinyangeni ezimbalwa ezedlule bethule imodeli yokuqala eyayinikezwe uhlobo lwe ingalo yerobhothi ezizimele njengenhloko (iqiniso ukuthi bekungajwayelekile), yilokho irobhothi kushesha kakhulu maqondana nokunyakaza. Ngaphezu kwalokhu, ngokusho kweBoston Dynamics uqobo, irobhothi manje linamakhamera namalambu kuleyo ndawo okungabizwa kahle ngokuthi yinhloko.
Ukuze sazi zonke izifiso zeprojekthi efana naleyo enikeza impilo ku-SpotMini kuzofanele silinde ukwethulwa kwayo okusemthethweni
Elinye iphuzu eliheha ukunakwa kwale phrojekthi litholakala ezingeni lobuhle, futhi lokho kuphuka nayo yonke leyo miklamo 'nlies'iBoston Dynamics eyayihlale ibheja ngayo, ngisakhumbula wonke lawo marobhothi ayegqoke oplastiki abamnyama nezinsimbi ezazivezwe ngokuphelele. Endabeni ethize yeSpotMini, sibhekene nomzimba okuthi, njengoba ubona ezithombeni noma kuvidiyo ukuthi ngikushiye khona ekuqaleni kokuthunyelwe okunwetshiwe, uthola uhlobo ikesi eliphuzi elifihla konke okungaphakathi futhi lokho kunikeza umbono omuhle kakhulu webhobhothi, okungenani ngeso lenyama.
Okwamanje kuncane noma akukho okunye okwaziwayo ngaleli robhothi ngaphandle kwemininingwane embalwa abadali bayo ababone kufanele ukuthi bayiveze futhi abayisebenzisayo, ngokwabo, njengesikhalazo esethulweni esizokwenzeka ezinsukwini ezimbalwa ezizayo, ngasiphi isikhathi abaqondisi beBoston Dynamics abazokwenza kahle yembula zonke izici zayo nokucaciswa okuningi kobuchwepheshe.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ubuchwepheshe » I-Robotics » IBoston Dynamics iyasimangaza ngemascot yayo entsha yamarobhothi
Jabulela iminyaka engu-10, Kindle, inguquko yokufunda ngekhompyutha
I-Airbus Vahana, imoto endizayo manje elungele ukuhlolwa okokuqala